ကိုကိုမောင်ရဲ့ စာမျက်နှာ - မြန်မာသူငယ်ချင်းများအဖွဲ့
FM မှာ စပြီးအဖွဲ့ ဝင်မယ် /
အားလုံးအတွက် အနွေးထွေးဆုံး တစ်ခုတည်းသောနေရာ
ပင်မစာမျက်နှာTop Ten များကိုယ့်စာမျက်နှာကိုယ့်စာတိုက်ပုံးကိုယ့်အကြောင်းပြင်မယ်ကိုယ့်Pageကိုအလှဆင်မယ်FMကစာပို့တာထိန်းချုပ်မယ်ဓာတ်ပုံတင်မယ်ဗီဒီယိုတင်မယ်ဗျာဓာတ်ပုံတွေSlide Show ကြည့်မယ်ဓာတ်ပုံတင်မယ်ကိုယ့် Album တွေကိုယ့်ဓာတ်ပုံတွေAlbum အားလုံးမန်ဘာများFMအက်ဒမင်စာရင်းအထူးအဖွဲ့ဝင်များတစ်ပတ်အတွင်းအထင်ရှားဆုံးတစ်လအတွင်းအထင်ရှားဆုံးဖိုရမ်(ဆွေးနွေးခန်း)ဖိုရမ်ရေးမယ်ဆွေးနွေးခန်းရင်ဖွင့်မယ်အကူအညီမိတ်ဆက်မယ်မေးချင်ရာမေးဖြေချင်ရာဖြေရေးချင်ရာရေးဖတ်ချင်ရာဖတ်အချစ်အကြောင်းပြောကြမယ်အထွေထွေကဏ္ဍကဗျာပျိုးခင်းကျန်းမာရေး ကဏ္ဍဘာသာရေး ကဏ္ဍဗဟုသုတ ကဏ္ဍစာပေကဏ္ဍအခန်းဆက်ဇာတ်လမ်းတွဲသတင်းပညာရေးကဏ္ဍစီးပွားရေးကဏ္ဍမီးဖိုချောင် ကဏ္ဍပရလောကစိတ်အပန်းဖြေ♫တေးဂီတကဏ္ဍ♪Chess ထိုးမယ်ဟာသကဏ္ဍကာတွန်းလေးများဂိမ်းလောကLyricစာပေါလောကသီချင်းတွေဖျက်ရေးမယ်နည်းပညာကဏ္ဍICT ပြဿနာတွေမေးမယ်အင်တာနက်ဗဟုသုတDownload ဇုန်Software & ApplicationHardware & ထိန်းသိမ်းရေးမိုဘိုင်းဖုန်း(စုံ) ကဏ္ဍAdnroid ကဏ္ဍProgrammingNetworkingဗိုင်းရပ်စ်ကဏ္ဍGraphics & DesignWebsite & Web DevelopingHackingSecurityOS ပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့ တွေအဖွဲ့သစ်ဖွဲ့စည်းမယ်အထူးအဖွဲ့များလူအများဆုံးအဖွဲ့များအက္ခရာစဉ်လိုက်ကြည့်ရန်လတ်တလောလှုပ်ရှားမှုဘလော့ဘလော့ရေးမယ်အကောင်းဆုံးBlogSelectionတစ်ပတ်အတွင်းအကောင်းဆုံးတစ်လအတွင်းအကောင်းဆုံးနည်းပညာ ဘလော့ဗဟုသုတ ဘလော့ဟာသ ဘလော့ကဗျာဘလော့များကျန်းမာရေးဘလော့များပရဟိတကဏ္ဍ၂၀၁၂ အလှူရှင်များFM ပရဟိတ(မန်း)FM ပရဟိတ (ရန်ကုန်)ပြိုင်ပွဲစက်တင်ဘာ Top Member ဆုသြဂုတ်လ Top Member ဆုဇူလိုင်လ Top Member ဆုဇွန်လ Top Member ဆုမေလ Top Member ဆုမတ်လ Top Memberဆုဖေဖော်ဝါရီTop Member ဆုဇန်န၀ါရီ Top Member ဆုအာဇာနည်နေ့ စာမူပြိုင်ပွဲစာမျက်နှာအလှပြိုင်ပွဲ ဆုကျင်းပနေတဲ့ပြိုင်ပွဲများFMကဏ္ဍများGmail လက်ဆောင်FM သီချင်းတောင်းFM ရင်ထဲကစကားFM ကိုအကြံပြုမယ်FM အကူအညီဌာနFMတိုင်ကြားစာလက်ခံဌာနFMသတင်းနဲ့ပိုစ့်FMသန့််ရှင်းရေးFMစကားဝိုင်းလူတိုင်းအတွက်စကားဝိုင်းချက်ဘောက်ပြဿနာရှင်းဖို့ချက်ဘောက်အမည်ပျက်စာရင်း
အမျိုးသား18နေပြည်တော်Tonga နှစ်သက်တယ်2members like this
မျှဝေမယ် .. Twitter
ဘလော့ပိုစ့်ဆွေးနွေးချက်တွေEventsအဖွဲ့ တွေဓာတ်ပုံတွေ (8)ဓာတ်ပုံ အယ်လ်ဘန် (1)ဗီဒီယို ကိုကိုမောင် နှစ်သက်တယ် ကိုကိုမောင် ရဲ့  သူငယ်ချင်းတွေ
အားလုံးကိုကြည့်မယ် လက်ခံရရှိတဲ့ လက်ဆောင်တွေ
ကိုကိုမောင် ဟာလောလောဆယ်တော့ လက်ဆောင်တွေ လက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးပါခင်ဗျား
ကိုကိုမောင် just checked out the RSS pages...(via RSS Pages)ဇွန်လ 27, 2011ကိုကိုမောင် liked ကိုကိုမောင်'s profileဇွန်လ 27, 2011ကိုကိုမောင် က ကိုယ်ရေးဖိုင်ကိုပြင်ဆင်သွားပါတယ်။ဇွန်လ 11, 2011ကိုကိုမောင် postedaphoto 000000000000ခဏတာ ရချင်မေလ 18, 2011 0
တသသ leftacomment for ကိုကိုမောင်"ခင်ပေ့ါ ချစ်လဲချစ်ပေ့ါရပါတယ် ဒီကလဲခင်လဲခင်တယ် ချစ်လဲချစ်တယ်............................
ဟိဟိ…"မေလ 9, 2011ကိုကိုမောင် commented on လွမ်းမေဦး's photoIMG_0054"လှတယ်ဆိုတဲ့ စကားလေတွေကို မင်အတွက်သီသံ ပြောခဲတယ်နော် ဒါပင်မဲ မင်က အသားမဲတယ်နော်"မေလ 6, 2011ကိုကိုမောင် liked လွမ်းမေဦး's photoIMG_0054မေလ 6, 2011ကိုကိုမောင် just scored 310 points on Pool Master.(via MindJolt Games)မေလ 6, 2011ကိုကိုမောင်ကတသသ ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲံပါတယ်
မေလ 5, 2011ကိုကိုမောင် leftacomment for တသသ"ခင်တယ် နောက်ပြီ ချစ်တယ် ညိမလို့နော်"မေလ 5, 2011တသသ leftacomment for ကိုကိုမောင်"ဟုတ် ညီမလေးပါ"မေလ 5, 2011ကိုကိုမောင် commented on တသသ's photoa"တစ်ဝက် ထဲ နော် မမလား ညီမလား"မေလ 3, 2011ကိုကိုမောင် leftacomment for ယမင်းလေး"အချိမ် တွေကြာကြီဘဲ နော် မတွေတာ ယမင် နှစ်သစ်မုာပျော်ရဲလား
ယမင် .......ပျော်နီုင်ပါစေ.........သူငယ်ချင်"မေလ 3, 2011ကိုကိုမောင် leftacomment for လမင်း"လမင်ဆိုတဲကောင်မလေ..........ကိုခင်ချင်တယ်
"မတ်လ 25, 2011ကိုကိုမောင် just checked out the RSS pages...(via RSS Pages)မတ်လ 8, 2011ကိုကိုမောင် just checked out the RSS pages...(via RSS Pages)မတ်လ 8, 2011လွမ်းမေဦး and ကိုကိုမောင် are now friendsမတ်လ 7, 2011လွမ်းမေဦး leftacomment for ကိုကိုမောင်"
"မတ်လ 6, 2011 ထပ်ပြီးတော့ ... RSS
ကိုယ့်မွေးနေ့? (နေ့ရက် နဲ့ သက္ကရာဇ်ကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးရမှာပါ)
ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 1992
ပညာအရည်အချင်းနဲ့ အလုပ်အကိုင်လေး ???
ကိုယ့်ရဲ့ ဆောင်ပုဒ် လေးကတော့ ...
http://storage.conduit.com/MarketPlace/df/5e7/df22ba1d-7d03-4fb6-986d-a7ccc057e5e7/Screenshot/634395976581437501.png ကိုကိုမောင် ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ
ခဏလေးနော် ... အ၀ိုင်းလေး လည်နေပါတယ်။ ...... ဓာတ်ပုံတင်မယ်
မြန်မာသူငယ်ချင်းများအဖွဲ့ ရဲ့ အဖွဲ့ ဝင်ဖြစ်မှ မှတ်ချက်ပေးလို့ရမှာပါခင်ဗျ
At 3:04pm on စက်တမ်ဘာလ 14, 2014, +!!!★*♥(အောင်ဖြိုးဇော်)♥*★!!!+ said… လာလည်ခဲ့ပါတယ်နော်
At 5:53pm on မေလ 9, 2011, တသသ said… ခင်ပေ့ါ ချစ်လဲချစ်ပေ့ါရပါတယ် ဒီကလဲခင်လဲခင်တယ် ချစ်လဲချစ်တယ်............................
At 6:31pm on မေလ 5, 2011, တသသ said… ဟုတ် ညီမလေးပါ At 1:11pm on ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2011, လွမ်းမေဦး said… At 4:36pm on ဇန္န၀ါရီလ 4, 2011, ည​မိုး​သ​ည်း said… နာ့ အကောင့်က blackangel.hello@gmail.com ပါ
ကြိုဆိုပါတယ်နော်...။ At 1:35am on ဇန္န၀ါရီလ 1, 2011, ယမင်းလေး said… မင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာလည်လို့လေ
ယမင်းလေးလည်းလာသွားတယ်နော် At 7:02pm on ဒီဇင်ဘာလ 24, 2010, ည​မိုး​သ​ည်း said… ဟိတ် သယ်ရင်းက feb 27 92 နော်
နာက feb 26 92
ဟတ် ဟတ် ၁ ရက်တောင်ကြီးတာနော်.. ရိုရိုသေသေ ဆက်ဆံ ..။:P At 4:02pm on ဒီဇင်ဘာလ 18, 2010, ချမ်း said… လာလည်ပါတယ်နော်
ပျော်နိုင်ပါစေ At 4:02pm on ဒီဇင်ဘာလ 18, 2010, ချမ်း said… လာလည်ပါတယ်နော်ပျော်နိုင်ပါစေ မှတ်ချက်တွေတော့ မရှိသေးပါ။
မြန်မာသူငယ်ချင်းများအဖွဲ့ မှကြိုဆိုပါတယ် !
FM မှာ စပြီးအဖွဲ့ ဝင်မယ် /(အဖွဲ့ ဝင်ပြီးသားဆိုရင်) ၀င်သုံးမယ်..
လှုပ်ရှားမှု အရှိဆုံးအဖွဲ့ဝင်များ ပြုပြင်မယ်
FM ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အောင်လေး
FM ပ၇ဟိတအဖွဲ့ (၇န်ကုန်)
FM Phone Center
ဒီတစ်ပတ် ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး ဖိုရမ်များ
ကော်နက်ရှင်မကောင်းလို့ ခဏလေးစောင့်ပေးပါ ...... (အ၀ိုင်းလေးလည်တာကို တရားသဘောနဲ့ ရှူ့မြင်ပေးပါရန် :P )	ဒီတစ်ပတ် ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး ဘလော့များ
1. မိန်းမများကို အန်စေသော ယောက်ျား နှင့် ယောက်ျားများကို အန်စေသော မိန်းမ
3. သူနဲ့ ကျွန်နော်
4. (မင်းဆက်ဝေ)-ရှုံးခဲ့ လား
5. ခံစားမှု့ 
© 2014 Created by နောင်လတ်(မန်း). သင်္ကေတ | Report an Issue | Terms of Service
Sign in to chat! အပေါ်သို့